Imbwa Nyika Webhusaiti ndeya AB yeInternet, mairi zuva rega rega kubvira 2011 tinokuzivisa iwe nezvemhando dzinozivikanwa dze canine uye idzo dzisina kunyanya kufarirwa, nezvetarisiro inodiwa nemumwe nemumwe wavo, uye, kana izvo zvisina kukwana, isu inokupa matipi mazhinji kuti iwe ugone kunakidzwa neshamwari yako ina-makumbo mana zvakanyanya uye zvirinani.
Dare rekunyora reMundo Perros rinoumbwa nechikwata chevanoda imbwa vechokwadi, vanozokupa zano pese paunenge uchirida chero paunenge uine mibvunzo nezve kuchengetwa uye / kana kuchengetwa kwemhuka dzine hushamwari dzinoonekwa seimwe yeshamwari dzakanakisa dzeHunhu. Kana iwe uchifarira kushanda nesu, zadza fomu rinotevera uye tichasangana newe.
Imbwa mhuka dzandakagara ndichifarira zvakanyanya. Ndakave nerombo rakanaka kugara nevakawanda muhupenyu hwangu hwese, uye nguva dzose, pazviitiko zvese, chiitiko chacho chave chisingakanganwike. Kupedza makore uine mhuka yakadaro kunogona chete kukuunzira zvinhu zvakanaka, nekuti zvinopa rudo pasina kukumbira chero chinhu kudzoserwa.
Anoda kwazvo mhuka uye imbwa hombe senge huskies, ini ndinofanirwa kugadzirisa kuti ndizvione kure nekuti ini ndinogara mufurati idiki kwazvo. Feni wembwa saSir Didymus naAmbrosius kana Kavik, imbwa mhumhi. Mumwe wangu mumwe wangu imbwa yemumakomo yeBernese inonzi Papabertie.
Kubva zvandaive nemakore matanhatu ndakave nembwa. Ini ndinoda kugovana hupenyu hwangu navo uye ndinogara ndichiedza kuzvizivisa kuti ndivape hwakanakisa hupenyu. Ndosaka ndichida kubatsira vamwe avo, seni, vanoziva kuti imbwa dzakakosha, mutoro watinofanira kutarisira nekuita kuti hupenyu hwavo hufadze sezvinobvira.
Ini ndaigara ndichikura ndakakomberedzwa nemhuka dzinovaraidza senge katsi dzeSiamese uye kunyanya imbwa, dzemarudzi akasiyana uye saizi. Iyo ndiyo yakanakisa kambani inogona kuvapo! Saka yega yega inokukoka iwe kuti uzive hunhu hwavo, kudzidziswa kwavo uye zvese zvavanoda. Nyika inonakidza izere nerudo rusingaverengeki uye zvimwe zvakawanda zvaunofanira kuwana mazuva ese.
Ini ndiri mudiwa mukuru wembwa uye ndanga ndichinunura nekudzichengeta kubva pandakanga ndakapfeka manapukeni. Ini ndinonyatsoda majaho, asi handikwanise kuramba kutaridzika uye nemasaini emamestizo, andinogovana navo zuva nezuva.
Ndave ndiri anozvipira mune yekuvanda kwemakore, ikozvino ndinofanira kupa nguva yangu yese kune imbwa dzangu, izvo zvisiri zvishoma. Ndinoyemura mhuka idzi, uye ndinonakidzwa nekupedza nguva nadzo.
Canine mudzidzisi, wega murairidzi uye ndinobikira imbwa dzinogara muSeville, ndine hukama hwakakura hwepasirese nembwa, nekuti ini ndinobva kumhuri yevanodzidzisa, vanochengeta uye vafudzi vehunyanzvi, kwezvizvarwa zvinoverengeka. Imbwa ndizvo zvandinoda uye nebasa rangu. Kana uine mibvunzo, ndichafara kukubatsira, iwe nembwa yako.